MDC Yopikisana neZESN
Mbudzi 22, 2007
MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti kunyange hazvo ichibvumirana negwaro reZESN rinoratidza kuti chirongwa cheMobile Registration Exercise hachina kufamba zvakanaka, havabvumi kuti mapato ezvematongerwo enyika, haana kukurudzira vatsigiri vavo kuti vanonyoresa sevavhoti.
Mugwaro rayo, ZESN inoti mapato ezvematongerwo enyika haana kuonekwa achiita mabasa ekukurudzira vatsigiri vavo kuti vanonyoresa pasi pechirongwa che Mobile Registration Exercise, icho chikapera svondo rapera. ZESN inoti makanzura e ZANU-PF, ndiwo aiwoneka achiita basa iri munzvimbo shoma dzinosanganisira Masvingo ne Kariba.
Mutori wenhau we Studio 7, Carole Gombakomba, aita hurukuro naVaIan Makone, avo vanoona nezvesarudzo mubato iri, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Ukuwo MDC inotungamirwa naVaArthur Mutambara inoti iri kuedzawo nepainogona napo, kufamba mumaruva, ichizivisa vatsigiri vayo nezvekukosha kwesarudzo, nekuvakurudzira kuti vanyorese, kunyange hazvo vasiri kufara nemamiriro akaita zvinhu.
Carole Gombakomba weStudio7 aita zvakare hurukuro naVa Paul Themba Nyathi avo vanoona nezvesarudzo mubato iri, kuti tinzwewo pfungwa dzavo panyaya iyi.